09 / 04 / 2018 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Abriil 9, 2018
Kantorka 4 Etap Kuruçeşme Tram Project Maqnaansho
Madaxweynaha AKP Izmit Hasan Ayaz ayaa warbixin ka siiyay fidinta khadka tareenka Kuruçeşme shir jaraa'id oo lagu qabtay dhismaha degmada maanta. Madaxweynaha AKP Izmit Hasan Ayaz [More ...]
Metro Muujinta ee Bursa
Duqa Magaalada Bursa Alinur Aktaş, salaadii subax kadib ee Masaajidka Pınarbaşı, wuxuu la kulmay muhaajiriinta xaafadaha degmooyinka taariikhiga ah ee magaalada, wuxuuna qabtay kulan wada tashi ah. Ku-xigeenka AK Party Cusmaan Mestan Bursa [More ...]
Ka dib markii la bixiyay Heshiiskii Osmaneli-Bursa-Bandirma YHT
Cusmaan-Burs-Bandırma Khadad Tareenka Xawaare Sare leh oo qiimeyn ku leh Duqa Magaalada Degmooyinka Cusmaaniyada Sahin, maalgashadayaasha Cusmaaneli waa diiradda fiiqidda kadib markii qandaraaska la yiri. Madaxweyne Kaahin, ”Hadda, gaar ahaan warshadaha [More ...]
TCDD KPSS 2017 / 2 waxay cusbooneysiisay liiska Natiijooyinka la keenay
doorashada KPSS 2017 / 2 ka dib markii lagu dhawaaqay natiijada Jamhuuriyadda Turkey Tareennada State (TCDD) ayaa daabacay dhawaaqay sida ku habboon. Si kastaba ha ahaatee, liiska ayaa dib loo cusbooneysiiyay oo magacyo cusub ayaa lagu daray liiska. [More ...]
Makhaayadaha Gawaarida ee Ankara
Kuxigeenka Ankara Nihat Yesil, oo sameeyay mooshin ku saabsan ajendaha magaalada, markan, gacmaha dadka Ankara waxay soo tuureen dhibaato aan dhamaad laheyn. Terminalka mobilada waa in laga sameeyaa Cagaarka; Mooshinka Golaha, waxyaabaha soo socda [More ...]
Tareenka Sare ee Xawaaladda ee Erdogan una socday Denizli
AK Party 6. Isaga oo ka hadlaya Golaha Guud ee Gobolka, Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu ka hadlay maalgelintooda Denizli tan iyo 2002 wuxuuna siiyay warka wanaagsan ee tareenka xawaaraha sare ku socda Denizli. Wadarta qiimaha 1,5 rubuc milyan oo ginni Denizli [More ...]
Waxay ku magacaabeen Tareenka Maxkamadda si ay u Helaan Saldhigga Gaaska
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay illowday inay gasho Gaaska Gawaarigiisa. Muwaadiniinta ayaa lagu qasbay inay cadaadiyaan dhirta si ay u gaaraan saldhigga aan qorshaysnayn ee Izmir Metropolitan Dowlada hoose waxay ku dartay hal abuur cusub. [More ...]
Production Plaster Siemens, hubka ahaayeen dalka Turkiga si loo dedejiyo in Tareenku
162 sano shirkado Jarmal ka hawlgala dalka Turkiga ayaa bilowday wax soo saarka ee tareenada-xawaaraha sare ee ka Siemens. Guddoomiyaha Guddiga Siemens Turkey iyo sarkaalka madaxa fulinta (CEO) Hüseyin Gelis, la-hawlgalayaasha wax soo saarka maxaliga ah ayaa sheegay in ay samayn lahayd. [More ...]
Wax soosaarka YHT ee Qaran wuxuu ahaa Gug kale
Qandaraaska mudnaanta koowaad ee wax soo saarka Tareenka Sare ee Qaranka (YHT), oo horay loogu dhawaaqay 25 Janawari, ayaa dib loo dhigay 5 Abriil oo hadda waa la kansalay. Maaddaama wax sharraxaad ah laga bixin [More ...]
Qaadashada tallaabooyinka lagu xaqiijinayo ammaanka duulimaadka garoonka diyaaradaha ee Istanbul
Waxaa socda dadaalo lagu doonayo in garoonka diyaaradaha ee cusub ee Istanbul loo diyaariyo taariikhdiisa furitaanka. 85 boqolkiiba xaqiijinta muuqaalka ee garoonka ayaa lagu gaadhay sababo maxalli ah, tallaabooyinka amniga lama iloobin. Istanbul [More ...]
20 Thousand People waxay ka shaqeeyaan dhismaha mitrooga ee Istanbul
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Istanbul Mevlüt Uysal wuxuu sheegay inay hadafkoodu yahay in la sameeyo 20 km metro line ugu badnaan 5 sanadka 10 sanadka iyadoo lagu wareejinayo 650 kun oo qof oo ka shaqeeya dhismooyinka metro-ga ee hada socda ee ka dhacaya Istanbul. [More ...]
Xaaladihii ugu dambeeyay ee Bakirkoy-Bağcılar Kirazli Subway
Golaha Magaalada Bağcılar Kazımkarabekir ee Golaha Shacbiga wuxuu la kulmay dadka dagan degmada Duqa Magaalada Bagcilar Lokman Çağırıcı, labadooduba waxay dhageysteen dhibaatooyinka muwaadiniinta waxayna u siinayeen war wanaagsan. Howlaha metroga ayaa sii socda [More ...]
RayHaber 09.04.2018 Warbixinta Shirka
Saliida Shidaalka ee la Iibsado Nidaamka Fashilinta Nidaamka Feejignaanta Nidaamka Digniinta Iibsiga (TÜLOMSAŞ) Qaybta Gaarka ah ee Afka ayaa la Heli Doonaa
Cusbitaalada Cusub ee Gaadiidka Dadweynaha ee Antalya
Dowladda Hoose ee Antalya waxay xoojineysaa isu socodka dadweynaha iyada oo la adeegsanaayo khadad cusub si kor loogu qaado qanacsanaanta muwaadiniinta. 1 Laga bilaabo Abriil, GM24 Güzeloba-Mevlana-Masadağı iyo ML22 Express Sarısu-100.Year-Square, oo keenay Masadağı badda, waxay bilaabeen duullimaadyo. [More ...]